Warshadaha Profileka Aluminium, Shirkadaha - Shiinaha Soosaarayaasha Profile Aluminium
Nidaamka astaanta guud ee aluminiumka FOEN T-slot Aluminium ayaa lagu dabaqay dhismaha mashiinka, qaab dhismeedka aluminiumka, warshadaha otomaatiga ah, maareynta alaabada, nidaamka weelka suunka iyo ilaalinida mashiinka ilaalinta iyo xirxiran. Qaab dhismeedka aluminiumka moodeelku waxay bixiyaan dabacsanaan sare iyo shaqeynta oo ay weheliso rafcaan muuqaal ah iyo nadiifin ahaanta dusha sare.
FOEN Aluminium waxay leedahay khadka wax soosaarka tikniyoolajiyad sare.T5 daaweynta kuleylka ayaa ah xulashada ugu fudud ee alaabadayada. Waxay noqon karaan kuwo si dabiici ah loo qaboojin karo ka dibna da 'ahaan kuleyl ahaan heerkulkoodu sarreeyo. .
Kooxda xirfadleyda ah si loo hubiyo tayada badeecada
Shirkadeena waxay leedahay khibrad kabadan 32 sano oo ah astaamaha fidinta aluminiumka waxaanna leenahay 3500 shaqaale oo ay kujiraan 40 injineerro xirfadeed iyo farsamo. Macaamiisha waxay aqoonsadeen shirkadaheena daaweyn tayo sare leh oo joogto ah marwalbana doorbida inay iibsadaan alaabadayada. Calaamadeynteena '' FOEN Brand '' waxaa la siiyay sumadda caanka ah ee Shiinaha. Alaabadayada ayaa si fiican wax uga iibisa suuqa gudaha sidoo kale waxaa loo dhoofiyaa suuqa caalamiga ah.